TRATRA IREO MPAMAKY TSENA
Nahomby ny mpiambin’Anosibe omaly tamin’ny asany. Teo am-pamakiana tsena ny telo lahy no saron’izy ireo.
Ny roa efa tafiditra tao anatin’ny tsena niaraka tamin’ny fitaovana samihafa izay famakiana trano. Isan’izany ny « bar à pince » sy ny lakile marobe. Sendra niverina tampoka ny mpiambina no nahita ny zava-nisy. Rifatra nitsoaka ireo roa lahy tety ivelany raha tsy afa-niala intsony kosa satria tratra ambodiomby ilay iray efa tafiditra tao anaty tsena.
Nitakosona ny PV na fitanana an-tsoratry ny fifidiana ary izay no nitarika ny ady teo amin’ny kandidà roa izay samy avy amin’ny tsy miankina tao amin’ny kaominina Analaroa, Anjozorobe. Niakatra eny anivon’ny tribunal misahana ny raharaham-panjakana koa ny raharaha ary isan’ny handrasana ny didy mifandraika amin’izany amin’ity herinandro ity, alohan’ny hamoahana ny valim-pifidianana ofisialy amin’ny zoma hoavy izao.
ADY TANY AMBODINISOTRY
Raikitra koa ny fifamaliana tetsy Ambodinisotry. Izany dia mbola mifandraika amin’ny raharaha ady tany hatrany. Tezitra ny olona raha handeha hamefy ny tany izay fiantsonan’ny fiara amin’ny andavanandro ny milaza ho tompon’ny tany. Tonga hatramin’ny fidirana an-tsehatry ny fokontany sy ny olona marobe mponina eo an-toerana vao nijanona izany. Tsy nijanona teo anefa ny raharaha satria nanapa-kevitra koa ny ankilany ny nampiakatra fitsaràna ireo olona izay nitokona.
VATO BE 30 HIRODANA
Manodidina ny vatobe 30 isa no hirodana atsy ho atsy ary tsy azo ihodivirana intsony. Ny olona anefa hatreto dia samy mbola tsy mahafoy ny tranony ary tsy mety miala eny an-toerana na dia nandeha aza ny fanentanana maro isan-karazany. Vokatr’izany dia nilaza mazava ny mpitandro ny filaminana fa hampiasa hery amin’izay ary tapitra hatreo ny fifampiresahana. Mampalahelo ny zava-misy noho ny goragora ara-panjakana hatrizay tamin’ny fanomezana fahazoan-dàlana hanamboatra trano.